SNAP iyo Socdaalka - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Xaalada Socdaalka iyo Kharashka Dadweynaha
Busca recursos gudaha Español?Una guía para información sobre SNAP iyo Carga PublicaUna guía para información sobre Carga Publica de parte de CausaUna presentación de parte de Oregon Recurso de Immigracíon
Heerka socdaalku wuxuu saameeyaa u-qalmitaanka SNAP. Baro xaqiiqooyinka si aad u hubiso in adiga iyo qoyskaaga aad heli kartaan cuntada aad u baahan tahay.
Xeerka guud ee u-qalmitaanka SNAP ee muwaadiniinta aan Maraykanka ahayn wuxuu u baahan yahay deganeyaal sharci ah inay ku noolaayeen Maraykanka ugu yaraan shan sano. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo badan oo ka reeban dadyow gaar ah sida qaxootiga, dhibanayaasha ka ganacsiga, iyo dadka magangalyada qaata.
Halkan waxaa ah shax ka caawinaya jebinta u-qalmitaanka SNAP ee muwaadiniinta aan Maraykanka ahayn.
LPR* (18 iyo ka badan)
U qalma (ka dib 5-sano bar ama taariikh shaqo oo u qalma)
LPR (ka yar 18)
LPR (Haweenka Uurka leh)
Qaxootiga, magangalyo-doonka, dhibanayaasha ka ganacsiga, qaar kale
Kuwa aan haysan dukumeenti iyo qaatayaasha DACA (ay ku jiraan carruurta iyo haweenka uurka leh)
* LPR waxay u taagan tahay "Deganaanshe Joogto ah oo Sharci ah," oo si wada jir ah loogu yeero kaarka cagaaran. Shaxdani waa nooc la fududeeyay oo mid ay daabacday Xarunta Sharciga Socdaalka Qaranka, kaas oo laga heli karo halkan.
Baro xaqiiqooyinka ku saabsan kharashka dadweynaha
Waxaa jira sharci cusub oo federaal ah oo bedelaya sida dadka loogu helo inay yihiin "Dawlad dadweyne". Waxa ay u ogolaataa wakaalada socdaalka ee federaalka in ay eegto liis dheer ee manfacyada dad waynaha iyo arimo badan sida dakhliga qoyska marka ay go'aaminayso in qofka ay u badantahay in uu noqdo masuulka dawlada mustaqbalka.
Laga bilaabo Janaayo 27, 2020, sharciga cusub ee dacwoodaha guud mar dambe lama xannibo. Xeerka cusub wuxuu dhaqan galayaa Febraayo 24, 2020. Xeerka cusub dib uma noqon doono, sidaa darteed wax kasta oo lagu daro imtixaanka Kharashka Dadweynaha cidna laguma dabaqi doono ilaa Febraayo 24, 2020 ka dib.
Xeerka cusub ee dacwoodaha guud ma codso qof walba.
Guud ahaan, sharciga Kharashka Dadwaynaha ayaa kaliya khuseeya:
Dadka doonaya gelitaanka ama dib-u-celinta Maraykanka
Dadka codsanaya inay la qabsadaan sharciga degananaanshaha rasmiga ah (LPR ama dadka haysta kaarka cagaaran), ama
Dadka codsanaya kordhinta fiisaha/cusbooneysiinta
Soo galooti badan oo u qalma ceyrta dadwaynaha ayaa laga dhaafay Imtixaanka Kharashka Dadweynaha.
Kuwani waa qaar ka mid ah noocyada soo-galootiga kuwaas oo ma samayn Waa in aad ka werwertaa Kharashka Dawladda, ilaa iyo inta aanay Maraykanka ka bixin in ka badan lix bilood:
Dadka horey u heystay LPRs (kaarka cagaaran) oo ay ku jiraan kuwa cusbooneysiinaya kaarka LPR
VAWA (Volence Against Women Act) kuwa iskood u codsada
Codsadayaasha fiisaha T ama U (dadka badbaaday ama ka ganacsiga, rabshadaha qoyska, ama dambiyada kale)
Dhallinta muhaajiriinta ee gaarka ah
Qoysaska waajibaadka milatari ee firfircoon, iyo kuwa kale
Kharashka cusub ee dadweynaha waa caddahay in dheefaha ay helaan xubnaha qoyska soogalootiga oo keliya (carruurta ama kuwa kale) ma samayn xisaabinta inta lagu guda jiro imtixaanka kharashka dadweynaha ee soogalootiga gudaha Maraykanka
Waxa aad ka ogaanayso Kharashka Dadweynaha iyo SNAP haddii aad haysato kaarka cagaaran
Ma waxaad codsaneysaa dhalasho (dabiici ah)?
Ma jiro imtixaan dadweyne oo adiga kugu saabsan.
Ma waxaad tahay dib u cusboonaysiinta kaarka cagaaran?
Ma waxaad ka tagaysaa Maraykanka lix bilood ama ka badan?
Kharashka Dadweynaha ayaa iman kara haddii aad isku daydo inaad ku soo laabato Maraykanka
La hadal qareen socdaalka ka hor intaadan ka tagin Maraykanka
Fiiro gaar ah: Si loogu qalmo SNAP, dadka sita kaarka cagaaran waxay caadi ahaan u baahan yihiin inay haystaan ​​sharciga degananaanshaha joogtada ah ee sharciga ah ilaa 5 sano ilaa ay yihiin ilmo ka yar 18 jir, ay leeyihiin naafo aad u daran, ay leeyihiin taariikh shaqo, ama ay hore u lahaayeen xaalad bini'aadantinimo, sida qaxooti ama magangalyo.
Waxa aad ka ogaanayso Kharashka Dadweynaha iyo SNAP haddii aanad haysan kaarka cagaaran
Ma u heshaa SNAP carruurtaada dhalashada Maraykanka ama dadka kale ee aad la nooshahay? *
SNAP-kooda wax raad ah kuma laha imtixaan kasta oo mustaqbalka ah oo dadweyne oo mustaqbalka ah.
U hayso SNAP carruurta/qoyska
Ma waxaad tahay qaxooti, ​​magangalyo, ka badbaaday tahriibinta (T Visa), ama soo galooti la garaacay (VAWA self petioner)?
Ma haysataa DACA, TPS, Visa U, ama Dhallin-yareedka Soogalootiga Gaarka ah?
Ma jiro imtixaan dadweyne oo adiga kugu saabsan, laakiin...
Xaq uma lihid SNAP.
* Soo-galootiga qaangaarka ah ee aan xaqa u lahayn waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay helaan SNAP iyagoo ka wakiil ah xubnaha qoyska ee u qalma, sida carruurtaada dhalashada Mareykanka. Haddii aad magacooda ku hesho kaarka EBT (magacaagu ku qoran yahay), faa'iidooyinka kaadhka ku jira waxaa leh xubnaha qoyska ee xaqa u leh.
Khayraadka Dheeraadka ah
Waraaqo xaqiiqo ah oo ka socda Oregon Hunger-Free ee SNAP iyo Kharashka Dadweynaha ee gudaha English iyo Spain
Warqadaha xaqiiqada eedeymaha dadweynaha ee ka socda Xarunta Sharciga ee Oregon, Causa, Oregon Latino Coalition in English, Spain, Shiinaha oo La Fududeeyay, Carabi, Vietnamese, Kuuriyaan, Shiineys dhaqameed, Ruush, Iyo somali
Su'aalaha Inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan Mas'uuliyadda Dadweynaha Ka socota Maamulka Caafimaadka Oregon
Powerpoint ka Ilaha Socdaalka Oregon gudaha English iyo Spain